Fortnite crossplay pane iOS haichawanikwi | IPhone nhau
Fortnite crossplay pane iOS haichawanikwe
Sezvakarongwa, Epic Mitambo yakaburitsa iyo mwaka mutsva we fortnite, nhamba 4 yechitsauko 2. Epic haina chinangwa chekuchinja mafambiro avakaita muna Nyamavhuvhu 13 nekubatanidza yayo yega yekutenga ichidarika nhungamiro dzeApp Store.
Sezvo iko kunyorera kusingawanikwe kurodha pasi, izvi haikwanisi kugadzirisa kumwaka mutsva, saka kunyangwe iwe uchiramba uchiramba uchitamba (zvirinani izvozvi) haugone kutenga iyo nyowani yekupfuura, yekupfuura yehondo iyo inosanganisira huwandu hwakawanda hweMarvel magamba senge Ironman, Wolverine, Thor ...
Asi izvi kwete iro chete dambudziko revashandisi rinosangana naro kuti ivo vanonakidzwa chete nemutambo uyu kubva kune iPhone kana iPad, nekuti nekuwedzera, crossplay haiwanikwe neye asiri-Apple zvishandiso Nenzira iyi, zvinongogoneka kutamba nevamwe vashandisi vanofarira zita iri kubva kuMac kana iOS chishandiso.
Kana iwe uchiwanzo kutamba neshamwari dzine Nintendo switchch, PlayStation, Xbox, Android terminal kana PC, unogona kutanga kukanganwa kutamba neshamwari dzako zvakare. Zvakare zvinoratidzwa kuti kurwa pakati pemakambani makuru maviri kunoguma sei kukuvadza mushandisi wekupedzisira.
Kana iwe ukavhura mutambo pane yako iPhone kana iPad, iwe uchaona kuti iyo yekupasa bhokisi bhokisi rakaremara. Kana iwe ukapinda mutambo, mepu ichiri kuratidza iwo mazita enzvimbo akafanana seomumwaka wapfuura. Pakukoka shamwari isingashandisi iPhone, iPad, kana Mac, izvi Iwe haugone kujoina nekuti iwe une yekare vhezheni yemutambo.
Epic Mitambo yakasimbisa kupera kweichi chiitiko kune The Verge. Parizvino, uye kunyangwe zvakataurwa nemutongi Muvhuro wadarika, unogona kuenderera mberi uchitamba Fortnite pane zvishandiso zveIOS, asi isu hatizive kusvika riini. Zvichida kuti mangwana 28, icharega kushanda zvakazara, zuva iro nguva yekupedzisira iyo Apple yakapa Epic kuti ifungisise isati yabvisa account yayo yekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Fortnite crossplay pane iOS haichawanikwe
Asi usashambadze yakadai fortnite, sezvo isiri yedu tese inoitamba uye ivo vari kuipa "yemahara" kushambadzira, kungoti kana vasingateerere mitemo, vanobuda muchitoro zviri nyore.
"Baba, kwezuva rangu rekuzvarwa ndinoda nharembozha, asi ini ndinoda yakanaka inogona kutamba Fortnite."
Uchaona zvinoseka. Vana varombo vane vabereki vasingazive kana kupasa "nekuti PUBG yakafanana" vari kuzoodzwa moyo.
Ndichiri kurangarira pandakanonoka kuburitswa kweFortite paApple kwemwedzi mishoma kuti ifarire kutengeswa kwePhones uye ikozvino vanoedza kudzikisa kukosha kwemutambo.
Kunyangwe tichizvida kana kwete pakati pevana, zvinotakura huremu hwakawanda. Kana shamwari dzake dzese dzichitamba Fortnite uye yako isingakwanise kunyangwe iwe wakamupa runhare runoshamisa, ndiudze.
Sezvandakareva mune dzimwe nhau, Apple ichafanirwa kupa munguva pfupi inotevera, hoko kana nekoronyera. Izvo hazvigone kuti Netflix nemamwe mapuratifomu ekuteerera ari kugadzikana nezviri mukati uye zvirongwa zvemitengo, asi pachinzvimbo nemitambo yemavhidhiyo, Apple inofanirwa kubhadharwa mutero pakutengeserana kwega kwega.
Nokukurumidza ivo vanoenzanisa mamiriro ezvinhu kuNetflix uye zvichingodaro, zvirinani. Vashandisi havafanirwe kuibhadhara (chaiko).